အစိုးရ စစ်တပ်က KIA ဌာနချုပ်ကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက် | ဧရာဝတီ
အစိုးရ စစ်တပ်က KIA ဌာနချုပ်ကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်
ဧရာဝတီ| January 7, 2013 | Hits:961
| | ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ဌာနချုပ်ဘက်သို့ အစိုးရစစ်တပ်က လက်နက်ကြီးများ သုံး၍ ယမန်နေ့က ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိခိုက်သေဆုံးမှုနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို မသိရှိရကြောင်း AP သတင်း တရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် အစိုးရတပ် သိမ်းယူခဲ့သည့် လိုင်ဇာမြို့အနီး တောင်ကုန်းမှ လက်နက်ကြီး ၁၀၅ မမ ဖြင့် အနီးအနားရှိ KIA စစ်စခန်းများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်က ဆိုသည်။ တိုက်လေယာဉ်များ၊ ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ တိုက်ခိုက်မှုများနောက်ပိုင်း နှစ်ဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုများပြားလာခြင်းဖြစ်ပြီး ယခု တိုက်ခိုက်မှုသည် ဒုတိယအကြိမ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးလနန်က ပြောထားသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> joe January 10, 2013 - 2:34 pm	What I understand in democracy way , people should follow up on decision which is more vote and maximum percentage according . So in our country ,we have ( 135 ) nationality lives and stay together , ( 134 ) nationality leader are agree on terms and condition , why Kachin leader not want to agree , that’s not the normal way of thinking as country man . They should look other nationality and follow up vote decision, they should understand most of nationality are wanted peace , they should look their Kachin people desire and development state , they should become peace like another nationality . Why so difficult for them to be come peace , they are same people in country , they stay same land and same citizen , why they want special nationality , why they want to fight for , why they not want to give up for their Kachin people , who’s ask them to fight ‘ who’s ask them to claim so many condition , who’s ask them to do . Please understand that you are same as another nationality in Myanmar , so do not think you can get more facility above other ( 134 ) nationality , now we stay in democracy country , why they want to agree on democracy way , Kachin defender have to follow up like another nationality , see everywhere , don’t see only what you wanted to see . Do it for your country and do it for your state people . Try to honest to country man ,don’t become traitor to country